tvk – Networks – MMANIME
Earl and Fairy Earl and fairy (2008) အခုတစ္ခါေတာ့ Romance/fantasy ဆန္ဆန္ seriesေလးတစ္ခု တင္ေပးခ်င္ပါတယ္ဗ် ဒီ seriesေလးမွာေတာ့ နတ္သမီးဆရာဝန္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ေလဒီယာရဲ့ဇာတ္လမ္းေလးကို ၾကည့္ရႈၾကရမွာပါ ေလဒီယာဟာ အဂၤလန္မွာေနထိုင္သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး နတ္သမီးဆရာဝန္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့အတြက္ သာမန္လူသားတို႔ မျမင္နိုင္ မၾကားနိုင္တဲ့ နတ္သူငယ္ေတြနဲ႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံနိုင္သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေန႔ေတာ့ ေလဒီယာရဲ့ဖခင္ျဖစ္သူဆီမွ လန္ဒန္ကိုလာခဲ့ဖို႔ စာတစ္ေစာင္ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္ ။ ေလဒီယာလည္း လန္ဒန္ကို သြားမယ္အလုပ္ လမ္းခုလတ္မွာပဲ သူရဲေကာင္းမ်ိဴးရိုး ကိုယ္ေတာ္ေခ်ာ Edgarရဲ့ ဖမ္းဆီးျခင္းကို ခံလိုက္ရပါေတာ့တယ္ ။ Edgarဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပ်ာက္ဆုံးေနတဲ့ ဒ႑ာရီ ဓားတစ္လက္ကို ရွာဖို႔ ႀကိဳးစားေနသူတစ္ဦးပါ ။ ဒီဓားကိုနတ္သူငယ္ေတြက ဝွက္ထားတာျဖစ္ၿပီး ရွာဖို႔အတြက္ သူမရဲ့အကူအညီကိုလိုအပ္ေၾကာင္း ေလဒီယာတစ္ေယာက္ သိရွိလာတဲ့အခါမွာေတာ့. . . ေလဒီယာတစ္ေယာက္ Edgarကို ကူညီနိုင္ပါ့မလား Edgarေရာ ဒီဓားကို ရွာေတြ႕နိုင္မလား သူတို႔ ႏွစ္ဦးၾကားက ဆက္ဆံေရးေတြေရာ ဘယ္လိုျဖစ္လာမလဲဆိုတာကိုေတာ့ ခံစားၾကည့္ရႈေပးၾကပါဦးခင္ဗ် unicode Earl ...
School Days Overview The story is aboutalove triangle between the male protagonist Makoto, and the two heroines Kotonoha and Sekai. Makoto developsalove interest in Kotonoha,agirl in the same year but different class. Although they both take the same train to school, she is unaware of his existence. His classmate, Sekai, manages to put the two together despite ...
C³ Cube x Cursed x Curious C³ ဟာ Light Novel အနေနဲ့အရင်ထွက်ရှိခဲ့ပြီး Hazuki Minase ကရေးသားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် Anime ဇာတ်လမ်းတွဲကိုတော့ ဒါရိုက်တာ Shin Onuma ကရိုက်ကူးပေးထါးတာဖြစ်ပြီး Silver Link Studio ကနေမှဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ် အပိုင်းအနေနဲ့တော့ 13 ပိုင်းရှိပြီးဇာတ်လမ်းပိုင်းနဲ့ပက်သက်လို့အနည်းငယ်ဝေဖန်မှုတွေတော့ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် C³ ဆိုတဲ့ Anime ဇာတ်လမ်းလေးကို Haruaki Yachi ဆိုတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်အပေါ်အဓိကဇာတ်အိမ်တည်ထားတာဖြစ်ပြီး Yachi ဟာတစ်နေ့မှာတော့​ပြည်ပရောက် ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်ဖြစ်တဲ့သူ့အဖေဆီက အနက်ရောင် Cube တစ်ခုကိုရရှိခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒီညမှာပဲ Yachi ဟာမီးဖိုချောင်ထဲမှထူးဆန်းတဲ့အသံတစ်သံကြောင့်နိုးလာခဲ့ပြီးသွားကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ အဝတ်အစားမပါဝစ်လစ်စလစ်နဲ့အပြာရောင်ဆံသားပိုင်ရှင်မိန်းကလေး​တစ်ယောက် ဆန်မုန့်ကြွပ်တွေကိုခိုးစားနေတာတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ် ဆံပင်ပြာနဲ့မိန်းကလေးဟာသူ့ကိုယ်သူ "Fear" ( ဂျပန်လို​တော့ Fia ဟုခေါ်သည်) လို့ခေါ်ကြောင်းမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးYachi ဖခင်ပို့လိုက်တဲ့အနက်ရောင် Cube ဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရပါတော့တယ် အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Fia ဆိုတဲ့ကောင်မလေးဟာ ကျိန်စာသင့်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်နေပြီးအတိတ်တုန်းကလူသားတွေရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေကိုဖြည့်ဆည်းရာမှာအသုံးပြုတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသိလာရပြီးနောက်မှာတော့ Yachi အနေနဲ့ဘာဆက်လုပ်မလဲ? ကျန်စာမိနေတဲ့ကောင်မလေးကိုပဲကယ်တင်မလား အသုံးချမလား?ရှေ့လျှောက်ဘယ်လိုအန္တရာယ်တွေရောပေါ်လာလိမ့်မလဲ ဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် #LCAM Download link<< Episode 1 Episode2Episode 3
Deadman Wonderland Deadman Wonderland (デッドマンワンダーランド)ကိုmangaအဖြစ်Jinsei Kataokaကရေးသားခဲ့ပြီးKazuma Kondōကanimationအဖြစ်ဖန်တီးပုံဖော်ခဲ့ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဥ်းကတော့ တစ်ချိန်ကဂျပန်မှာငလျင်ကြီးတစ်ခုအကြီးအကျယ်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါဂျပန်ရဲ့မြို့တော်တိုကျိုဟာအပျက်အစီးတွေများခဲ့ပြီးမြို့ရဲ့၄ပုံ၃ပုံဟာပယ်လယ်အောက်ကိုနစ်မြုပ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆယ်နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ နာဂါနိုအလယ်တန်းကျောင်းမှပညာသင်ကြားနေတဲ့သာမန်ကျောင်းသားလေး ဂန်တာ အီဂါရာရှိဆီမှာထူးဆန်းတာတွေစဖြစ်လာတော့တယ်။ဂန်တာဟာအဲ့သဘာဝကပ်ဆိုးကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့မကောင်းတဲ့မှတ်ဥာဏ်တွေမရှိဘဲသာမာန်ဘဝလေးနဲ့ဘဲနေထိုင်ခဲ့တယ်။တစ်ရက်မှာတော့သွေးတွေပတ်လည်ဝိုင်းထားပြီးအနီရောင်ဝတ်စုံကိုဝတ်ထားတဲ့အနီရောင်လူကြီးဟာ ဂန်တာကလွဲပြီးကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုသတ်ပစ်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့ဂန်တာရင်ဘက်ထဲကိုလည်းအနီရောင်ကျောက်တစ်ခုကိုထည့်ခဲ့တယ်။ဒီလိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်အသတ်ခံခဲ့ရတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဂန်တာဟာသူ့သူငယ်ချင်းတွေကိုပြန်သတ်ပါတယ်ဆိုပြီး သက်သေအတုတွေနဲ့စွပ်စွဲခဲ့တယ်။Deadman Wonderlandလို့ခေါ်တဲ့မရဏစံအိမ်အကျဥ်းထောင်ကြီးကိုပို့ခဲ့ကြတယ်။အဲ့မရဏစံအိမ်ကြီးဟာဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းပြီးအချင်းချင်းပြန်လည်သတ်ရတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေ သာမာန်ကျောင်းသားလေးဂန်တာဟာဘယ်လိုအသက်ရှင်ဖို့ရုန်းကန်ရလဲဆိုတာ အခုဘဲကြည့်လိုက်ကြပါဦးဗျ ကြည့်ပြီးသားလူတွေလည်း ဒီကားလေးကိုပြန်လည်အမှတ်ရလာအောင်ပြန်ကြည့်သင့်ပါတယ်လို့ characterတွေကrealityဆန်တာကြောင့် ဒီanimeဟာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးanimeတစ်ခုဖြစ်တဲ့အထိကြိုက်ပါတယ် Episode1 Episode2 Episode3 Episode4 Episode5 Episode6 Episode7 Episode8 Episode9 Episode10 Episode11 Episode12 ­